Plekhanov Rosiana University ny Toekarena - Study in Rosia
Plekhanov Rosiana University ny Toekarena
Plekhanov Rosiana University of Toekarena Details
fanafohezan-teny : Rea
Créé : 1907
Aza adino ny iaraho midinika ny Plekhanov Rosiana University ny Toekarena
Misoratra anarana ao amin'ny University of Plekhanov Rosiana Toekarena
ny Mission: ny mpitarika ao amin'ny fiofanana matihanina amin'ny rehetra-manodidina fomba fijery eo amin'ny sehatry ny toe-karena, mifototra amin'ny fomba amam-panao ara-tantara sy voafintina,, baovao ara-tsiansa sy ny fahombiazana ary ny fampandrosoana maharitra ny oniversite;Mission ny Plekhanov Rosiana Oniversiten'i Toekarena dia mifototra amin'ny:
fampandrosoana sy fanelezana ny Applied ara-toekarena sy ara-barotra ny fampianarana miorina amin'ny ara-tantara ny fitambaran'ny lova sy ny fandraisana fepetra fomban-drazana toy ny tena zava-dehibe manan-danja ara-tsosialy;
fampianarana nianatra sy mahay olona, izay afaka ho tonga mpitarika ao amin'ny eran-toe-karena.
Plekhanov Rosiana University of Toekarena dia Governemanta fikambanana ofisialy fahazoan-dàlana hamonjy fianarana ambony sy ny asa fanabeazana fanampiny. Status ny “University” dia midika fa ny andrim-panjakana ambony (undergraduate & nahazo diplaoma) ary ny lahatsoratra-nahazo diplaoma ny fanabeazana dia manokana tao amin'ny saha manokana – toekarena & Management. University no lehibe indrindra ara-toekarena any Rosia rafitra fanabeazana sy ny Firaisana Sovietika teo aloha. Izany dia ahitana ny manaraka fahaizanareo: General, Toekarena; Fifandraisana iraisam-pirenena Business; International Business School (IBS- Plekhanov); Finance, Accounting sy Banking; Toekarena sy ny Management; hetra Policy; Commercial Engineering; Fitantanana orinasa; Economic Cybernetics; Retailing; Toekarena ny Enterprises; Fianarana politika sy ny lalàna; Faculty of Business sy MBA Sekoly.
Plekhanov University manolotra roa-anivon'ny rafitra ny toe-karena sy ny raharaham-barotra ny fanabeazana. Ny ambaratonga voalohany – ny efa-taona manontolo andro Bachelor Degree Program mikendry voalohany indrindra amin'ny fampitana ny fahalalana malalaka ny fototry ny toe-karena sy ny raharaham-barotra fampianarana. Ny ambaratonga faharoa – roa taona manontolo andro Master Degree Program – dia hahazo fahaiza-manao matihanina ireo mpianatra mifantoka kokoa voafidy akaiky teo amin'ny saha.
Ny nahazo diplaoma dia afaka mirotsaka ny tanora amin'ny lafiny rehetra ao amin'ny firenena ny orinasa, toe-karena sy ny varotra. Afa-tsy ho an'ireo mpianatra izay misafidy ny handeha amin'ny fandalinana fanampiny, ny asa tahan'ny ny nahazo diplaoma dia tena avo.
Tena mirehareha izahay fa maro ny mpahay siansa malaza indrindra, mpahay toe-karena, ara-politika sy ny raharaham-barotra ny mpitarika, diplaomaty sy ny hafa izao matihanina mavitrika eo amin'ny toe-karena Rosiana vaovao no Plekhanov fiofanana.
Izahay koa indrindra nirehareha noho ny zava-misy fa ny Plekhanov diplaoma dia ny fanamarinan'ny UNESCO.
Miezaka ny hamorona ny fepetra rehetra ho amin'ny avo indrindra ny fampianarana ao anatin'izany ny fahafahana no hivory hiaraka mitarika Western Oniversite nandritra ny fianarana akademika any ivelany. Te-hanana eo ny nahazo diplaoma tena matihanina, nahita fianarana ambony sy manan-tsaina ny olona.
Faculty ny Fitantanam-bola
Faculty ny Fifandraisana ara-toekarena iraisam-pirenena
Faculty ny matematika Toekarena sy Statistics
Faculty ny Ara-toekarena Trading
Faculty ny Hotel, Restaurant, Sport Tourism sy ny Indostria
Faculty ny Additional Professional Fanabeazana
Faculty ny Marketing
Faculty ny Management
Main Building ao amin'ny Oniversiten'i
Faculty ny General Toekarena
Business School manontolo ny
Business School ny Marketing sy fandraharahana
Faculty ny Applied Baccalaureate
Faculty ny Distance Fianarana
Faculty ny Electronic Fanabeazana
Plekhanov Rosiana University of Toekarena manana 107 taona ny tantara sy mifandray akaiky amin'ny sehatra ara-barotra sy ny orinasa Rosia.
Ny tena ilàna ny hampiofana ireo mpiasa matihanina - mpitantana, mpahay toe-karena, injeniera ara-barotra - dia tonga tamin'ny fiatoana-tendany fitomboan'ny indostria sy ny toekarena tao amin'ny Fanjakana Rosiana am-piandohana 20faha century.At izay andro fiaraha-monina noho ny fitomboan'ny Moscou ny fanabeazana ara-barotra efa nividy ny tany amin'ny fanomezana in Zamoskvorechye ho an'ny fanorenana ny kolejy ara-barotra ho an'ny lehilahy.
Ny kolejy ara-barotra ho an'ny olona dia naorina ny Rosiana mpandraharaha sy philanthropistAlexey Vishnyakov in 1901. Tany am-boalohany ny kolejy dia hita ao hazo trano. In autumn 1903 ny trano vaovao ny kolejy vita amin'ny famolavolana ny maritrano malaza AlexanderZelenko nanokatra ny varavarany. In 1904 ny ara-barotra ho an'ny olona kolejy dia tamim-boninahitra atao hoe taorian'ny Tsesarevich Alexey.
Herintaona taty aoriana akaiky ny oniversite ho an'ny olona ny Fikambanana ara-barotra nanokatra ny vehivavy kolejy amin'ny trano fiangonana noho ny Reny ny kisary "Recovery ny lavo". Mandritra izany fotoana izany ny antokony ho an'ny fanofanana ny mpampianatra ho an'ny kolejy ireo efa voalamina. By 1907 ny antokony efa lehibe ho tanteraka ny haavon'ny-draharahan'ny sekoly ambony ary izy ireo ho any Moscou fanavaozana ara-barotra Institiota. Ny Minisitry ny Varotra sy ny Indostria Rosiana Fanjakana nanao sonia ny antontan-taratasy manan-danja Febroary 19, 1907 ary izany no heverina daty ny daty ny fototry ny sekoly ambony Rosiana voalohany ny toekarena.
In 1911 ny fanorenana ny trano institiota nanomboka. Indrisy, ihany no voalohany kosa efa natsangana, ny ady lehibe voalohany nisakana ny fanorenana bebe kokoa. Nandritra ny ady mihoatra noho ny 2000 mpianatra niady ary niasa tao amin'ny ilay ady, sy ny hopitaly fa naratra miaramila no nokarakaraina tao amin'ny fanorenana sekoly ara-barotra ho an'ny vehivavy.
In 1919 ny Institute lasa fanjakana ary nanova ny anarany ho an'ny National Institute of Moscow Toekarena. Tany am-boalohany dia atao hoe Karl Marx taorian'ny, ary afa-tsy 1924 ny institiota Nomena anaran'i GeorgiPlehanov -Russian filozofa sy ny fijangajangana Marksista theoretician.
Tamin'ny taona voalohany ny fitondrana sovietika ny institiota Niady mafy noho ny fisiany - dia nisy ny tsy fahampian'ny solika, sakafo; tsy nisy karama ho an'ny mpampianatra amin'ny andro korontana. The Institute, na izany aza, nandimby ny handeha amin'ny vanim-potoana sarotra sy handroso indray.
The 40faha nitondra ny firenena mahatsiravina nanjo - Ady Lehibe Faharoa. Nandritra ny ady an-jatony ireo mpianatra sy ny mpiasa miasa ao Moscow Institute-pirenena Toekarena sisa ho ilay ady sy ny ankamaroan'izy ireo dia mpiasa an-tsitrapo. Ny ankamaroan'izy ireo niady tamin'ny 17faha ny vonjy taitra ny olona an-tsitrapo Corps, Nizara ny manontolo "Plekhanov orinasa ny mpiasa".
Post ady taona no fotoana ao amin'ny National Institute of Moscow Toekarena fanambinana. Institute lasa sekoly ambony lehibe indrindra ara-toekarena Sovietika mombamomba azy ao Rosia. Ny mpanao re-fitaovana ny siansa sy ny teknika fototra dia nitarika sy liam-pivoarana ara-toekarena ihany koa fanadihadiana. In 1970-80 ny trano-pampianarana vaovao, kolontsaina foibe, dia naorina efitrano fatoriana iombonana. Nandritra ny Moscou in Lalao Olaimpika 1980 sportsmen ny vahiny nipetraka tao amin'ny Institute'sdormitory.
In 1991 manohitra ny fototra ara-tsosialy sy ara-politika ny fiovana eo amin'ny RussiaMoscow National Institute of Toekarena nanova ny anarany ary lasa Plekhanov Rosiana Academy ny Toekarena. Ny Akademia dian'ny foana amin'ny fotoana, nefa tsy miova haingana ambadiky ny zava-misy amin'ny fiainana ara-toekarena Rosiana.
Plekhanov Rosiana Academy ny Toekarena efa nihaona tamin'ny taonjato faha XXI vaovao manodidina ny fampandrosoana - famerenana indray ny dingana fanabeazana, faritra fampiofanana vaovao, ary lehibe ny fikarakarana sy ny asa fanorenana. In 2010 ny Akademia dia nahazo ny sata ambony ny Oniversite.
Rehefa zato taona ny Voalohany sy ny Faharoa trano ara-tantara ny Oniversite no aseho eo anoloantsika ny tarehin'ny voalohany. Ny famerenana amin'ny laoniny ny trano ara-tantara ao amin'ny University nanaovana, ny voalohany fijery hihahenjana. Fa tena zava-dehibe ny hamonjy ny ara-tantara afovoan-trano, maha-azo itokiana ny fijery. Ny tanàna afaka mirehareha ny naverina tamin'ny laoniny tsangambato ny maritrano ny fiandohan'ny taonjato XX sy ny mpianatra sy ny mpiasa dia afaka mankafy ny fianarana sy miasa ao amin'ny fanabeazana mahazo aina tsara tarehy sy ny trano.
Ankehitriny Plekhanov University of Toekarena Rosiana dia fantatra sy malaza-pampianarana sy ara-tsiansa marika. Ampahafolon'ny arivo nahazo diplaoma avy amin'ny oniversite miasa soa aman-tsara any Rosia sy any ivelany, ary ny ankamaroan'izy ireo dia ny rehaka momba izao fiainana ara-toekarena Rosiana.
Ianao ve mila iaraho midinika ny Plekhanov Rosiana University ny Toekarena ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Plekhanov Rosiana ao amin'ny University of Toekarena Map
Photos: Plekhanov Rosiana University ny Toekarena ofisialy Facebook
Plekhanov Rosiana University of Toekarena hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Plekhanov Rosiana University of Toekarena.
University simika Teknolojia Rosia Moscow
Voalohany Pavlov State University Medical ny St. Petersburg Saint Petersburg